စွဲငြိဖွယ်ရာ - စာမျက်နှာ5- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: immersive (စာမျက်နှာ 5)
2018 HPA ဆုပေးပွဲများအတွက်ကြေညာလိုက်သည်အမည်စာရင်းတင်သွင်း
ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) သည် HPA ဆုပေးပွဲဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများအတွက် 2018 အမည်စာရင်းတင်သွင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုပေးပွဲပရိသတ်တွေအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ထူးချွန်အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်များကိုဆောင်ခဲ့သောသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့များအားဖြင့်အောင်မြင်မှုနှင့်အနုပညာထူးချွန်ဂုဏ်ပြုခြင်းတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖန်တီးမှုထူးချွန်နှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်စံဆောင်လုလင်သဲနည်းပညာများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုတိုးချဲ့ခင်းကျင်းလက်ခံစဉ်းစားနေကြပါတယ် ...
IMT Vislink နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိ MotoAmerica အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ Event မှာဗီဒီယိုနည်းပညာ onboard ပေး
MILLVILLE, NJ, စကျတငျဘာ 24, 2018 - xG®နည်းပညာ, Inc ( "xG"): အဘယ်သူ၏တံဆိပ်တွေကထုတ်လွှင့်, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်များတွင်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည် (Nasdaq XGTI, XGTIW), IMT Vislink စက်တင်ဘာလကျင်းပခဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲပြိုင်ကားအဖြစ်အပျက်၏ 2018 MotoAmerica ချန်ပီယံရှစ်မှာ onboard ကိုဗီဒီယိုနည်းပညာကိုအသားပေးထားသောပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ...
IBC 12 မှာ Aja မိတ်ဆက်နယူး 2018G-SDI, အိုင်ပီနှင့် HDR Solutions
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, IBC ညီလာခံ 7.C25 (စက်တင်ဘာလ 14, 2018) ရပ် - IBC 2018 မှာ 7.C25 ရပ်, Aja ပညာရှင်များဟာလက်ခံခွင့်ပြု, Multi-format နဲ့အကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေပိုကောင်းအောင်အသစ်ကိရိယာများနှင့်မွမ်းမံမှုများကြေညာလိုက်ပါတယ် နောက်ဆုံးပေါ် 12G-SDI နှင့် HDMI 2.0 နည်းပညာအဖြစ်အိုင်ပီနှင့် HDR ကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပုံစံများထွန်းသစ်စ။ 5G-SDI I / O နှင့် IPR-12G10-HDMI နှင့်အတူ KONA2ထံမှ ...
AWS မီးမောင်းထိုးပြထားသည်တိမ်တိုက် Advanced IBC ပြရန် 2018 မှာမီဒီယာအကြောင်းအရာ Chain တလွှား
။ ကဗီဒီယိုပံ့ပိုးပေးထိရောက်မှု, သွက်လက်, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်စကေး Portland, Ore မှာမီဒီယာ Workflows များအတွက်ထောက်လှမ်းရေးရဖို့ကိုကူညီတီထွင်မှု - အမေဇုံက Web Services က, Inc (AWS), တစ်ဦး Amazon.com ကုမ္ပဏီ, ယနေ့မီဒီယာစားသုံးမိဘို့အဆင့်မြင့်ချဉ်းကပ်မှုသရုပ်ပြအစီအစဉ်များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ , 2018 မှတဆင့်ဗွီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် IBC 14 Show မှာဖြန့်ဝေ, သိမ်းဆည်းခြင်း, content တွေကိုပိုက်ဆံရှာခြင်းနှင့်စက်-သင်ယူခြင်းတိုးမြှင့်ဗီဒီယို, စက်တင်ဘာ 18, 5.C80 ရပ်, RAI ...
IMT Vislink IBC 2018 မှာ Panasonic ကနှင့်အတူပူးတွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြေညာ
အဘယ်သူ၏ IMT Vislink တံဆိပ်တွေကထုတ်လွှင့်အတွက်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်, ဥပဒေစိုးမိုးရေး: - အမ်စတာဒမ်, စကျတငျဘာ 6, 2018 xG နည်းပညာ, Inc ( "xG" ဒါမှမဟုတ် "ကုမ္ပဏီ") (XGTI, XGTIW Nasdaq) နှင့်ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်, (1.A69 ရပ်) IMT Vislink ယခုနှစ် IBC ရှိုးမှာ Panasonic က၎င်း၏ပူးတွဲပူးပေါင်းပြပါလိမ့်မည်ကြေငြာခဲ့သည်။ IBC ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒီမိတ်ဖက်ခြေတစ်လှမ်း, အရာအားလုံး IMT Vislink ရဲ့ပြင်ပ ...
တိုယိုတာ Highlander ရဲ့နယူး Multi-Platform ကင်ပိန်းများအတွက် Burrell နှင့်အတူကိုလိုနီအသင်းများ
တိုယိုတာများအတွက် Burrell ရဲ့အသစ် Multi-Platform ကိုလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်ကမ်ပိန်းကိုသူတို့ 2018 တိုယိုတာ Highlander ၏နှစ်သိမ့်အတွက်ပျော်မွေ့အလိုအလျောက်မိသားစု Adventures လာအောင်နှိုးဆွကြောင်းအချိန်လေးဟာပျော်စရာ-မေတ္တာရှင်စိတ်ကူးယဉ် Powell မိသားစုပတ်ပတ်လည်စင်တာနှင့် '' အသက်တာ၏အချပ် '' ။ ကိုလိုနီခေတ်မှာအသင်း GIF များ, cinemagraphs ပါဝင်သည်ကြောင်းပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးများအတွက် Deliverable ပါဝငျတွေရဲ့ array ကိုတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခြင်း, ခံခဲ့ရပါတယ် ...
MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဂျင်မ် Henson ရဲ့အချိန် Piece, ဉျးကောင်းချီးအော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးဂန္ထဝင်ကိုပြန်လည်
HOLLYWOOD- MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မကြာသေးမီကညွှန်ကြားရေးထားလျက်ရှိ၏4တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်, အချိန် Piece တစ် 1965K ပွနျလညျထူထောငျပြီးစီးခဲ့နှင့်နှောင်းပိုင်းဂျင်မ် Henson သရုပ်ဆောင်။ အချိန်ကျမ်းပိုဒ်မှလွတ်မြောက်ရန်လူအပူတပြင်းကြိုးပမ်း၏ဇာတ်လမ်း, ရေတိုအနေနဲ့အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံ ယူ. စမ်းသပ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် Henson ရဲ့ underappreciated အလုပ်တစ်ခုသေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင် Restoring ကြောက်မက်ဖွယ်တင်ပြ ...
IBC2018 မှာ IPTV များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ပလက်ဖောင်း, HEVC တီထွင်အထူးပြုလုပ်ပါရန် VITEC
သြဂုတ်လ 14, 2018 - - ကုမ္ပဏီဆုကို-အနိုင်ရရှိမှု EZ တီဗီ IPTV & ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်စွမ်းဆိုင်းဘုတ်ပလက်ဖောင်း, စျေး MGW စိန်အိတ်ဆောင်ကို Quad-Channel ကို HEVC ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာပဲရစ်တိုးချဲ့ VITEC, အဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းနှင့် streaming များဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ပြုလုပ်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ယင်း၏ထုတ်လွှင့်တန်း EZ တီဗီ IPTV & ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ပလက်ဖောင်း, အများ၏ဗွီဒီယိုအသစ်သောမြို့ရိုးနှင့်မီဒီယာစာကြည့်တိုက်စွမ်းရည် ...
Edinburgh, ဗြိတိန်, ဇူလိုငျ 26, 2018 - သူတစ်ဦးအဖြစ် "ဘဝတွေကိုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအသံရှူရှိုက်" Will Morton, Solid Audioworks မှာတည်ထောင်သူနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးစွဲငြိဖွယ်ရာတေးသံတစ်ဦးကကစားသမားရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သိတယ်။ Rockstar မြောက်ကိုရီးယားအဘို့ယခင်အကြီးတန်းသံကိုဒီဇိုင်နာနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကြီးကြပ်ရေးမှူး, Morton အရှိဆုံးအချို့များအတွက်အသံထုတ်လုပ်မှုပေး 2014 အတွက် Solid Audioworks တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ...
JVC TAB 2018 မှာတက္ကဆက်လူငယ်ကဏ္ဍအဘို့အချိတ်ဆက်ပြီးသည် CAM တင်ဆက်ပေးတယ်
ဝိန်း, NJ (ဇူလိုင်လ 25, 2018) - JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, သြဂုတ်လ 900 ထုတ်လွှင့် 2018 စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ၏တက္ကဆက်အစည်းအရုံးမှာသစ်ကို GY-HC2 ချိတ်ဆက်ပြီးသည် CAM ထုတ်လွှင့်တီဗွီကင်မရာနှင့်အခြားထုတ်ကုန်ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် မြို့တွင်း Austin တွင်အဆိုပါ JW Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်မှာ။ High-end EFP, ENG နှင့်စတူဒီယို applications များ, သစ်ကို2/3လက်မအရွယ်ကင်မရာဒီဇိုင်း ...
Dallas, TX - တရုတ်ဂလိုဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက် (CGTN) ၏ငါးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်းများ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘီလီယံကိုတချက်ကလူသို့ရောက်ရှိ, အသစ် 2015 အတွက်၎င်း၏ထူးခြားသော Sonic အမှတ်တံဆိပ်စတင်ပြီးနောက်ကွန်ယက်ပြန်လာခဲ့သူစတီဖင်အာနိုး, Music, ၏ Sonic အမှတ်တံဆိပ်ယဉ်ကျေး updated ပါပြီ ။ ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက Flint Skallen နှင့်အတူတစ်ဖန်ပြန်လည်ပူးပေါင်း, စတီဖင်အာနိုးဂီတတစ်ခုကျယ်ပြန့်အထုပ်ထုတ်လုပ် ...
ဒါဟာ Blackmagic ဒီဇိုင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထုတ်ကုန်ဖန်တီးအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာပါတယ်။ အသစ် Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K (စက်တင်ဘာလ3၏မျှော်လင့်ထားရရှိနိုင်သည့်ရက်စွဲ, 2018) ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဘို့အဒါပေမယ့်လည်းစားသုံးသူများအတွက်သာအာရုံစူးစိုက်သည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာထဲမှာ 4fps အထိနှုန်းထားများမှာ3× 4096 DCI 2160K ပုံရိပ်တွေဖမ်းယူသော4/ 60 "အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထား ...
Ooyala ထပ်ပြောသည် VR360, HEVC လွှနှင့်၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုပလေးအောက် Solutions ရန်အပ်ဒိတ်များနှင့်အတူ Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းရန်ပို
သာ. ကွီးမွတျ Bandwidth ထိရောက်မှုနှင့် immersive ကိုကြည့်ခြင်းအားတွေ့ဆုံနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းသစ်စှမျးဖြည့်စွတ်ယနေ့ဗီဒီယို Marketplace ယနေ့ Ooyala လိုအပ်တာလဲ OoyalaLIVE အသစ်စွမ်းရည်နှင့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခု suite ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ၏အင်အားစိုက်ထုတ်ဖန်တီးမှု, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ငွေရစေခြင်းအဘို့အက၎င်း၏လျှောက်လွှာမဆိုအပေါ်ဖြစ်ရပ်များနှင့် linear ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့် စက်ကိရိယာ။ အခြားအဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများထဲတွင် Ooyala ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ယခု Ooyala ဖွ ...
BroadcastAsia 2018 ဒီနှစ်ပေါင်းရှိုးအများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနည်းပညာပျေါလှငျကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအမြဲကြည့်ရှုရောက်ရှိအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းများကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရွေ့လျားခြင်းနှင့်ရှာဖွေစူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် IP ကိုအခြေပြုအသံလွှင့်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာမီဒီယာလုံခြုံရေးမှတဆင့်ဖြစ်စေ, တဦးကိုအခြေခံက "အနာဂတ်ဖမ်းယူ" တူညီသောနေဆဲဖြစ်သည်။ #BROADCASTASIA 2018 မှာဒီနှစ်ပေါင်းညီလာခံဆက်ဆက်အများအပြားတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ...
FilmLight ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအရောင် masterclass ခရီးစဉ်စတင်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ HDR အပေါ် masterclasses ၏စီးရီး, အရောင် Workflows နှင့် colourists ကူညီရန်အတွက်သစ်ကိုအဆင့်နှင့်ပေးပို့ကိရိယာများ, DoPs နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post စက်မှုလုပ်ငန်း HDR နှင့်အသစ်ဖြန့်ဝေကို formats ဆောင်ကြဉ်းသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုနားလည်, FilmLight တစ်ဦးအပေါ်အထူးကြပ်မတ်များနှင့်အထူးကု masterclasses တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်လည်။ ရက်စွဲများပြီးသားလန်ဒန် (15 မေလ), မွန်ဘိုင်း (16 မေလ), ဟောလိဝုဒ်မဘို့ရာခန့်နေကြတယ် ...
ဆက်သွယ်ရေးအားလုံး-IP ကိုအတူ QVC ဂျပန်တွင် UHD ဖို့ Upgrade ပေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ဗီဒီယိုနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးလက်လီအရောင်းဆိုင်အသစ် State-Of-The-Art စက်ရုံတိုကျို, ဧပြီ 2110, 10 ဦးဆောင်မယ့်ကိုမြင်ယောင်ကြည့် SMPTE ST 2018-compliant Selenio ကွန်ယက်ပရိုကျောက်ဆူး - ဆက်သွယ်ရေးသစ်တစ်ခု, ပြည်နယ်-၏ကျောထောက်နောက်ခံအရေးပါအပြောင်းအလဲနဲ့, စောင့်ကြည့်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့် ဖွ-Art UHD နှင့် QVC ဂျပန်မှာ IP ကို-based ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ။ အဆိုပါ SMPTE ST အပေါ်အခြေခံပြီး compressed လုပ်မထားတဲ့ HD နှင့် UHD အချက်ပြမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသောအသစ်စက်ရုံ ...
5 ၏စာမျက်နှာ 22«ပထမဦးစွာ...«34567	»	1020...နောက်ဆုံး»